हाम्रो घरमा प्रत्येक कोठाको साथ जाने काठका शेल्फहरू बेजिया
तपाईंको घरको प्रत्येक कोठाको साथ काठको शेल्फहरू
सुसाना Godoy | 02/06/2021 16:00 | सजावट
जब हामी सजावटको बारेमा सोच्छौं, यो स्पष्ट छ काठको तखता तिनीहरू ती विकल्पहरू मध्ये एक हुन् जुन हामीले कहिल्यै पनि छुटाउनु हुँदैन। तिनीहरू वास्तवमै आवश्यक छन् र घरमा एक कोठाको लागि मात्र होइन तर धेरैको लागि। हामी यसलाई सजावटको विवरणको रूपमा तर स्टोरेज एकाइको रूपमा मनपर्दछौं।
तसर्थ, त्यहाँ सधैं एक हुनेछ जुन हाम्रो आवश्यकताहरूसँग मेल खान्छ, तर प्रत्येक कोठासँग। तसर्थ, हामी ती सबै समीक्षा गर्दछौं जसले हामीलाई हतार बाट बाहिर निकाल्छ र एकै साथ सबै कुनामा कभर गर्दछ। तपाइँ कसरी जान्न चाहानुहुन्छ तपाईंको प्रत्येक कोठा उनीहरूसँग सजाउनुहोस्?
1 बैठक कोठामा सजाउन उच्च काठको शेल्फहरू
2 डेस्क वा कार्यालय क्षेत्रहरूको लागि काठको शेल्फहरू
3 बच्चाहरूको कोठाको लागि कम वर्ग
4 बेडरूम को लागी आदर्श अलमाराहरू
5 स्पेस डिभाइडर तल बिना Shelving
बैठक कोठामा सजाउन उच्च काठको शेल्फहरू
सायद बैठक कोठामा हामी कसरी हेर्न चाहन्छौं अग्लो र साँघुरो ओछाहरू ठूलो क्षेत्र ओगट्छन्। यो सत्य हो कि एक तर्फ, पुस्तकहरू राख्न सक्षम हुन, तपाईं जहिले पनि अग्लो र साँघुरो टावरहरूमा शर्त लगाउन सक्नुहुन्छ। तर हामीलाई यो पनि थाहा छ कि मोड्युलर कम्पोजिजनहरू एक ठूलो विचार हो। यो यो हो कि हामी यी सेल्फहरू राख्न सक्दछौं, अर्को अर्को छेउमा। त्यसोभए हामी एक उत्तम रचना बनाउँदछौं यदि त्यो हाम्रो स्वाद हो र यदि ठाउँले यसलाई अनुमति दिन्छ भने। तर यो जस्तो हुन सक्छ, हो कि बैठक कोठामा टावरको रूपमा उनीहरूले यी तखताहरूमा बढी शर्त लगाउँछन्।
डेस्क वा कार्यालय क्षेत्रहरूको लागि काठको शेल्फहरू
यो सत्य हो कि त्यहाँ सजावटको लागि कुनै खास तरीका छैन, किनकि ती स्वादहरू भएको जस्तै तिनीहरू असीम हुन सक्छन्। तर अफिस वा अध्ययन कोठामा, हामी ओछ्यानमा शर्त लगाउन सक्छौं। यसरी, हामी किताब वा फाईलहरू पनि राख्दछौं र ती पर्खालहरूमा अवस्थित भएकाले तिनीहरू थप स be्कलन गरिन्छ। उनीहरूसँग हामी ठूलो ठाउँ बचत गर्नेछौं, किनकि पर्खालहरूको फाइदा उठाउनु हामीसँग सबै भन्दा राम्रो विकल्पहरू मध्ये एक हो।
शेल्फहरू अर्को हामी पनि छनौट गर्न सक्दछौं वर्ग तखताहरू जुन असममित तरीकाले भित्ताहरूसँगै मिलाउन सकिन्छ। यसैले हामी हाम्रो सजावटमा सबैभन्दा वास्तविक प्रभाव सिर्जना गर्नेछौं। काठको शेल्फ र उनीहरूका आकारहरूका बारे राम्रो कुरा यो हो कि हामी तिनीहरूलाई जोर्न चाहन्छौं हामी चाहन्छौं र तिनीहरूलाई रंगाउन पनि आवश्यक छ यदि तपाईं यो आवश्यक देख्नुभयो भने। किनकि रंगहरू पनि ती सजावटी विवरणहरू हुन् जुन हामीलाई सधैं आवश्यक हुन्छ।
बच्चाहरूको कोठाको लागि कम वर्ग
घरको सानो कोठाको लागि, हामीलाई पनि आवश्यक छ समतलहरूको श्रृ series्खलाले हामीलाई सबै खेलौना र पुस्तकहरू भण्डारण गर्न मद्दत गर्दछ। त्यसैले, त्यहाँ वर्ग मा शर्त जस्तै केहि छैन। यी बिभिन्न र colorsहरूमा फेला पार्न सकिन्छ र ती सामान्य भन्दा बढी जीवन्त र रमाइलो वातावरणको आनन्द लिन उत्तम हुन्छन्। हामीले पत्ता लगाउन सक्ने सबै मोडेलहरूको साथसाथै, यो पनि भनिनुपर्दछ कि हामीलाई यसको प्रतिरोधात्मक काठ चाहिन्छ, किनकि हामीलाई थाहा छ कि हामी अनावश्यक दुर्घटनाहरू चाहँदैनौं।
बेडरूम को लागी आदर्श अलमाराहरू
मुख्य क्षेत्रहरु को अर्को बेडरूम हो। तसर्थ, हामीलाई उनीहरूले यस क्षेत्रको आवश्यकताहरू पूरा गर्न आवश्यक छ र सबै भन्दा माथि, तिनीहरूले हेडबोर्ड भाग मा ध्यान केन्द्रित गर्न जाँदैछन्। त्यसोभए यहाँ हामी अलम घडीहरू, पुस्तकहरू र अन्य सजावटी वस्तुहरूको रूपमा आवश्यक पर्ने भण्डाराहरू पाउन सक्दछौं। तर यो पनि सत्य हो कि तपाई स्ट्यान्डिंग र मोड्युलर शेल्फहरू रोज्न सक्नुहुनेछ जुन सँधै तपाईको स्थानमा निर्भर हुन्छ। तपाईलाई आवश्यक पर्ने सबै थोकहरू राख्ने क्रममा यसलाई सिर्जनात्मक स्पर्श दिन सक्षम हुनु राम्रो विचार हो। यदि तपाईंसँग ठाउँ छैन भने, तपाईंलाई पहिले नै थाहा छ कि भित्ताहरू अझै हाम्रो साथीहरू हुन्।
स्पेस डिभाइडर तल बिना Shelving
जब हामी खाली ठाउँ सिमित गर्न चाहन्छौं, हामीसँग यो धेरै सरल छ। हामी यस जस्तो विचारमा शर्त लगाउन सक्छौं जुन कुनै शेल्फको मजा लिनेमा आधारित छ जुन कुनै तल छैन, त्यो छ, खुला छ, र यसलाई राख्दै दुबै बस्ने कोठालाई खाने कोठा र प्रवेश क्षेत्रबाट अलग गर्नुहोस्। एक रचनात्मक विचार जुन तपाई दिमागमा रहेका सबै सजावटी शैलीहरूमा सामेल हुन उत्तम हुनेछ। के तपाईलाई काठका सल्फहरू मन पर्छ? तपाइँ तिनीहरूलाई कहाँ राख्नुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » सजावट » तपाईंको घरको प्रत्येक कोठाको साथ काठको शेल्फहरू
ब्लूम पत्ता लगाउनुहोस्, कम्पेन्टा फन्टास्टिकको SS21 संग्रह
यस गर्मी २०२१ मा व्यापक रूपमा जाँदै जाने मेनीक्योर आईडियाहरू